5 ခုနှစ်တွင်ကျောင်းမှရောင်းအားပိုမိုပြန်မောင်းရန်မဟာဗျူဟာ ၅ Martech Zone
တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 5, 2019 တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 5, 2019 Douglas Karr
Back-to-School သည်ယခုနှစ်၏ဒုတိယအကြီးဆုံးစျေးဝယ်ရာသီဖြစ်ပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာသည် ၀ ယ်ယူသူများ၏ ၀ ယ်ယူမှုလမ်းကြောင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ယခုနှစ်တွင်အဆိုပါ NRF မှပြန်လည်ကောလိပ်တက်ရန်ခန့်မှန်းထားသည် တစ် ဦး တည်းအသုံးစရိတ်တစ်ခုအကောင့်ပါလိမ့်မယ် အံ့သြစရာ $ 54.5 ဘီလီယံအထိ.
k-12 အသုံးစရိတ်နှင့်အတူကျောင်းသို့ပြန်သွားသောစျေးဝယ်ခြင်းသည်ဒေါ်လာ ၈၀.၇ ဘီလီယံခန့်ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က $ 82.8 ဘီလီယံကနေ.
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ကျောင်းမှပြန်ကြားရေးအသုံးစရိတ်၏ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်အွန်လိုင်းပေါ်မှဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်, နောက်ကျောကျောင်းမှစျေးဝယ်ခြင်း၏ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်အွန်လိုင်းမှဖြစ်သည်.
2018 ခုနှစ်တွင် k-12 နောက်ကျောကျောင်းမှစျေးဝယ်ကျောင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်းများအပေါ်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ပျမ်းမျှ $ 685 သုံးစွဲခဲ့ ... ထိုပမာဏကိုမျှော်လင့်ထား အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင်ကျောင်းအသုံးစရိတ်ကိုဒေါ်လာ ၆၉၆.၇၀ သို့တိုးမြှင့်ခြင်း.
ကောလိပ်မှ ပြန်၍ ပညာရေးအသုံးစရိတ်သည်အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင်နောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၂၈၀ ထပ်ပေါင်းခဲ့သည် ကောလိပ် -related အသုံးစရိတ်အတွက် $ 976.78 အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင်
Deloitte အဆိုအရ k-57 ကျောင်းမှပြန်ကြားရေးအသုံးစရိတ်၏ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရှိသည်။ ဒီနှစ်မှာတော့ ၅၆ ရာနှုန်းလောက်အတူတူပဲဖြစ်တယ်။
Moms စျေးဝယ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအဖေ များမှာ ကျောင်း ၀ ယ်ခြင်းအတွက်ဒေါ်လာ ၁၁၅ ပိုကုန်ကျသည်.
The Shelf မှဤအချက်အလက်။ သင်၏ Back-to-School Campaign ကိုသင်လှုံ့ဆော်ရန်သင်လိုအပ်သည့်အချက်များအားလုံး, စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်ကျောင်းသို့ပြန်သွားသောစျေးဝယ်ခြင်းကိုအသုံးချနိုင်သောနည်းဗျူဟာ ၅ ချက်ကိုဖော်ပြသည်။
အချိန်ဖိအားပေးခံရသောမိဘများသည်ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်လူမှုရေးနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်တွင်မှီခိုအားထားကြရသည် ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပြီးအချိန်ဇယားဆွဲပါ ကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတချို့
ပြေးတာကိုစဉ်းစားပါ နယူးစတင်ဖို့ မိဘများကသူတို့၏ကလေးများအားကျောင်းသစ်သို့မဟုတ်ကောလိပ်သစ်မှ စ၍ ခံစားရသည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုထိတွေ့ရန်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး။
မေးမြန်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထောက်ခံသူများနှင့်သြဇာ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုသူတို့လုပ်ကိုင်ပြီးဖြစ်သောရာထူးတစ်ခုသို့ထည့်သွင်းရန်။
နှင့်မိတ်ဖက် မေမေဘလော့ဂါများ ၀ ယ်သူ၏ရှေ့တွင်ရောက်ရှိရန်နှင့်အသုံးပြုသူမှထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာများကိုသင့်အားကူညီရန်။
နှင့်အတူမိဘများ ကလေးများ အထူးသဖြင့်သိမ်းဆည်းရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေနေသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ထုတ်ကုန်များကို တွဲ၍ သင်၏ပစ်မှတ်များကိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြင့်စုစည်းထားသည်။
ဤတွင် 2019 လက်လီရောင်းချသူများနှင့် e-commerce ကုမ္ပဏီများအတွက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အသစ်သောအချက်အလက်အသစ်များနှင့်ပြည့်နေသည့်အချက်အလက်များ။
Tags: 2019နောက်ကျောကောလိပ်ကျောင်းပြန်ကျောင်းနောက်ကျောကျောင်းကစျေးဝယ်နောက်ကျော -to- ကျောင်းကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျောင်းပြန်ရောင်းခြင်းကျောင်းပြန်အသုံးစရိတ်အတွင်းပိုင်းအမှတ်